Stuffed mbatatisi Art sens - mazano eimba nebindu
10.05.2014 Yakatumirwa na: Art Sense
Mbatatisi ndechimwe chezvipo zvepamusoro kune dzazvino dzinogashirwa kubva kuvagari vekare veAndes. Munyika yokumusha kwavo, aya mapena anomiririwa nemhando dzakawanda dzechimiro, mhando, ruvara uye kuravira zvingashamise mutorwa. Vakaunzwa nemaSpaniards kuEurope. Kukura pasi pevhu, izvo zvakasikwa zvipo zvakabvunzwa zvakakwira mumakadhibidrate uye zvakare zvine mapuroteni, mineral (kunyanya potasium) uye mavitamini, kusanganisira vitamini C. Nhasi, mbatatisi dzakunda nyika, uye kuvapo kwavo mukicheni imwe neimwe kunofanirwa. Ivo vanokurumidza uye nyore kugadzirira. Ivo zvinonaka zvakabikwa pamwe zvakabikwa kana zvakakangwa. Nekudaro, pfungwa dziripo ndedzemota dzakabikwa. Pano isu tinongoratidza mamwe emamwe embodiments, asi miganhu yekubatanidza kuravira inogona kungoiswa nekufungidzira. Nenyama, mukaka, zai, yemiriwo kana combo zvinhu, aya "maapuro epasi" (ChiFrench - "pomme de terre"; Chihebheru - - ()
Zvigadzirwa zvinodiwa mbatatisi, siki, soseji, mazai, parsley, maorivhi, bhotela, miriwo uye chero imwe inowedzera inowedzera iwe.
Unoshamba kwazvo wobheka kana kubikira mbatatisi, uchingwarira kuti usapisa kupisa. Zvichienderana nerudzi, ukuru uye zano rako, unogona kuona zvekuita zvinotevera. Kune mbatatisi hombe, cheka nepakati uye ugove hafu imwe neimwe. Ravira uye gira mafuta nebhotoro rakanyungudutswa kana mafuta omuorivhi Isa zvinhu zvacho uye ubike muvheni ine mwero. Iwe unogona kushandisa hollow core senge yekudzosera sofa paunenge uchishumira, kana kusanganisa nezvimwe zvekutakudza zvinhu wobva wazvibika kana kuzvibaya iwe pachako. Kana iwe uine mbatatisi diki asi uchida zai mukuzadza, unogona kupatsanura zai rezai. Mapuroteni akasanganiswa neakakandirwa kunze chikamu uye zvimwe zvigadzirwa, zvakarungwa uye mbatatisi mabhobhokisi akabikwa, uye yolk yakabikwa nechikamu chikuru.
Imwe nzira ndeyekucheka iyo chivharo chete. Paunenge uchiveza iwe unowana socket mbatatisi umo musanganiswa wakasiyana unogona kurongwa. Nenzira iyi, iwe unogona kushandira akati wandei madiki anonaka pamwe nekugadzirira kumwe. Kana iwe uchikarira kushandisa nyama kana miriwo inoda kurapwa kwenguva refu, zvinokurudzirwa kuti uvagadzirire pachine nguva. Pfungwa iyi sarudzo yakakwana yekushandisa zvidiki zvidiki zvezvigadzirwa zvisina kukwana kuzvitengera.
pfungwa, zano nembatatisi, mbatatisi, mbatatisi nesosi, mbatatisi nemafuta, mbatatisi ne stuffing, mbatatisi ne stuffing, mbatatisi neshizi nezai, mafungiro ehupfumi, muyedzo wechechi, mhinduro yehupiki nembatatisi, mbatatisi dzakabikwa, zvakabikwa mbatatisi, bhotoro rakanyungudutswa, dhizaini yekubika mbatatisi, bota nembatatisi, mapikicha, mira wega ndiro, kupisa kurapa, mazano epamba, zvemukati dhizaini, fenicha, zvemukati mazano, dhizaini mazano, imba yemazuva ano, kurongedza mazano, hunyanzvi mazano
Inonakidza midziyo yekukicheni nemidziyo
Yakawanda inoshanda dzimba gadget. Mune yedu yakakurumidza-pached maitiro emazuva ese, sezvo isu tichikura nekuwedzera ...
Heano mamwe mafungiro emaoko akagadzirwa mukati kana gadheni ...
Munyu wicker chinwiwa
Tinokupa imwe inonakidza sarudzo yekugadzira pacheki ne twist. Unogona ...
Kuomesa yakapenda mazai eIsita
Matekiniki uye nzira dzekushongedza mazai eIsita akawanda, asi kunyangwe zvipi maitiro
Baba vane tarenda vanoita pancake dzakasiyana
Heano maitiro ana baba vane tarenda vanozadzisa zvido zvevana vavo nekuvaita pancake ...
Zviitire iwe gedhi remunda wemapuranga
Muzhinji, iyo suwo regadheni muganho pakati penyika yakatenderedza nenzvimbo yedu ...
Gadzira tsvina musungo
Pfungwa yekuti chero munhu angagadzira sei wasp mute inonyanya kubatsira nekuuya kwekudziya ...
Mune iyo mitsara inotevera isu tichaisa mamwe mazano uye matipi ekugadzirwa kwemukati meimba yekutandarira ...